ကေမန်ကျွန်းစုသို့ခရီးစဉ် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ခရီးသွားနေရာများ, ကျွန်းများ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လှပသောကျွန်းများနှင့်ကျွန်းများစွာရှိသည် ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် ကပရဒိသုကောင်းတစ် ဦး ငွေပမာဏကိုအာရုံစူးစိုက်။ ဥပမာ, ကေမန်ကျွန်းများဂျမေကာနှင့်ယူကတန်ကျွန်းဆွယ်အကြားရှိဗြိတိသျှပိုင်နယ်မြေဖြစ်သည် အခွန်ဆိပ် ကုမ္ပဏီများနှင့်သန်းကြွယ်သူဌေးအခွန်ရှောင်ဘယ်မှာ။
သို့သော်ကေမန်ကျွန်းစုများမှာ၎င်းတို့ရှိသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဒီတော့ဒီနေ့သူတို့တွေဘာတွေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ရှုခင်းတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုသိတော့မယ်။
2 Cayman ကျွန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကျွန်းများ စုစုပေါင်းသုံးရှိပါတယ် သူတို့သည်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အနောက်ဘက်၊ ကျူးဘားတောင်ဘက်နှင့်ဟွန်ဒူးရပ်စ်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်။ အဲဒါအကြောင်းပါ Grand Cayman ကျွန်း၊ Cayman Brac နှင့် Little Cayman။ မြို့တော်သည် Grand Cayman ရှိ George Town ဖြစ်သည်။
ကိုလံဘတ်စ်ကသူ၏နောက်ဆုံးခရီးစဉ်တွင် ၁၅၀၃ တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ကိုလံဘတ်စ်သည်တိရိစ္ဆာန်များစွာအတွက် Las Tortugas အား၎င်းတို့အားနှစ်ခြင်းပေးခဲ့သည်။ သို့သော်မိကျောင်းခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်များလည်းရှိခဲ့ပြီးယနေ့ မှစတင်၍ ၎င်းတို့တွင်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များသည်ဥရောပအခြေချနေထိုင်မှုမတိုင်မီကနေထိုင်ခဲ့သောရုပ်ကြွင်းများကိုမတွေ့ရသော်လည်းမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
ထိုအခါကျွန်းများရှိကြ၏ Cromwel စစ်တပ်မှပင်လယ်ဓားပြများ၊ ကုန်သည်များနှင့်သဲကန္တာရများ၏နေရာများထို့နောက်အားဖြင့်အင်္ဂလန်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၆၇၀ တွင်မက်ဒရစ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်အင်္ဂလန်သည်ဂျမေကာနှင့်အတူကျွန်းများနှင့်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကပင်လယ်ဓားပြများအတွက်ပရဒိသုဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုသည်ကျွန်းများမှကံကြမ္မာကိုထောင်နှင့်ချီသောအာဖရိကမှခေါ်ဆောင်လာသောအခါပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကိုင်မန်ကျွန်းများသည်ဂျမေကာ၏ကျောထောက်နောက်ခံမှုအောက်တွင်ရှိသည်၁၉၆၂ အထိဂျမေကာလွတ်လပ်ရေးရလာသည်။ ကျွန်းများပေါ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်းမပြုမီနှစ်အနည်းငယ်ကခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါဘဏ်များ, ဟိုတယ်များနှင့်အပျော်စီးဆိပ်ကမ်းကိုရောက်လာတယ်။ သမိုင်းအစဉ်အလာအရကေမန်ကျွန်းများသည်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်းသူကျွန်းသားများကယ်ဆယ်ခဲ့သောသင်္ဘောပျက်တစ်ခုအကြောင်းမမှန်သည့်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ဒဏ္ာရီကပြောကြားရာတွင်ကယ်တင်ခြင်းတွင်သူတို့သည်အင်္ဂလိပ်သရဖူကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုဆိုသည်။
ကျွန်းများသည်ရေအောက်တောင်တန်းများ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော Cayman Range (သို့) Cayman Rise ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မိုင်ယာမီမှကီလိုမီတာ ၇၀၀ ခန့်နှင့်ကျူးဘားမှ ၃၆၆ ဦး သာရှိသည်။ Grand Cayman ကျွန်းသည်သုံးကျွန်းတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်းသုံးကျွန်းသည်ရေခဲပြင်မှတောင်ထိပ်များဖြစ်သောကျူးဘားရှိ Sierra Maestra အကြွင်းအကျန်များကိုသန္တာကျောက်တန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရာသီဥတုမှာအပူပိုင်းစိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သည်.
ကျွန်းကနေစကြရအောင် ကေဒါ။ လှတယ် ခုနစ်မိုင်သဲသောင်ပြင်ဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများစွာကိုအာရုံစိုက်ထားသည့်အတွက် s သည်ခရီးသွားများထိပ်ဆုံး ၃ နေရာတွင်ရှိသည်။ ဒါတစ်ခုပါ သန္တာကမ်းခြေ ကျွန်း၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်လှပသော။ ၎င်းသည်အများပိုင်ကမ်းခြေဖြစ်ပြီးခြေလျင်ဖြင့်လေ့လာနိုင်ပြီး၎င်း၏အမည်မှာ ၁၀ ကီလိုမီတာခန့်ရှိသည်။ နောက်ထပ်ကမ်းရိုးတန်း ဦး တည်ရာသည် North အသံ, Stingrays ၏အိမ်။
ဂျော့ခ်ျမြို့ ရိုးရာဗိသုကာ၊ အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်များ၊ အချမ်းသာဆုံးနှင့်လက်မှုပစ္စည်းဆိုင်များနှင့်ဒေသခံထုတ်ကုန်များအတွက်သီးသန့်အမှတ်တံဆိပ်များရှိသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမြို့ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်သို့ကျွန်းကိုဖြတ်ပြီးသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ရုက္ခဗေဒပန်းခြံ သို့မဟုတ် အပြာရောင် Iguanass ။ ဒေသခံသမိုင်းကိုသိရန်လည်းမရှိ ကေမန်ကျွန်းစုပြတိုက်, Rum Point နှင့်၎င်း၏ရေငုပ်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်၎င်း၏ casuarina သစ်ပင်များ, အ Pedro St Jame ရဲတိုက်s, ကျွန်းများပေါ်တွင်ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အ ဦး, ဒါမှမဟုတ် Bodden မြို့, ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်းမြို့။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Cayman Brac သည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် သဘာဝ နှင့်အခွန်လွတ်စျေးဆိုင်။ ကျွန်းတွင်သိရန်ကျောက်ဂူများရှိသည်။ တွင်းပေါက်များရှိသည် ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်း, နစ်မြုပ်နေသောသင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်အတူကျွန်း၏စိမ်းလန်းသောသစ်တောများ၊ ထူးခြားဆန်းပြားသောငှက်များနေထိုင်ရန်လှပသောနေအိမ်များရှိသည်။ တောင်တက်ရန်ပျော်မွေ့ရန်လမ်းကြောင်းများနှင့်တန်းစီထားသည်။ ဤတွင်သင်သည်ကဲမန်ကျွန်းမှနာရီဝက်ခန့်၊ ထိုလေယာဉ်ဖြင့်ထိုနေရာတွင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။
ဤအတောအတွင်း Cayman Little သည်ဝေးလံသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်၁၆ ကီလိုမီတာအရှည်ရှိပြီးတစ်ကီလိုမီတာတစ် ၀ က်အကျယ်သာရှိသည်။ ဒါဟာစူပါတိတ်ဆိတ်တဲ့ ဦး တည်ရာသည် စွန့်ပစ်ကမ်းခြေs, လေနှင့်အတူရွေ့လျားစွန်ပလွံပင်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေ ... သင်စူးစမ်းဖို့စက်ဘီးသို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်ငှားရမ်းခြင်း, ၏ပူနွေးသောရေတွင်ရေကူးနိုင်ပါတယ် တောင် Hole အသံဂွ, အရံသွားရောက်ကြည့်ရှု သဘာဝ Booby ရေကန်, ထောင်ပေါင်းများစွာသောငှက်များနှင့်အတူကျောက်တန်းကြား၌အပန်းဖြေသို့မဟုတ်ရေကူး သွေးထွက်သံယိုဂလားပင်လယ်အော်အမှတ်တရရေကြောင်းပန်းခြံ.
ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ် မီတာ 1500 ကျဆင်း ဒါ့အပြင်ရေငုပ်သမားတွေအတွက်သံလိုက်တစ်ခုပါ ရေလုပ်သားဘဝ ရောင်ခြည်များ၊ ငါးမန်းများနှင့်လိပ်များရှားပါးမှုမရှိသောနေရာများတွင်ဖုံးကွယ်ထားတတ်သည်။ လှေလှော်ကန်ထဲကိုနည်းနည်းလှော်ခတ်ပြီးသင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာကိုသင်ဝံ့နိုင်သည် Owen ကျွန်းအသိအမှတ်မပြုခံရသောကေမန်ကျွန်းနှင့်တူသည်။
ကမန်ကျွန်းစုများသို့လည်ပတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စီစဉ်နိုင်မည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည် Grand Cayman တွင်အချိန်နှင့်အခြားကျွန်းတစ်ကျွန်းတွင်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြိုးစားလိုပါက ၁၀ ရက်အစကောင်းနိုင်သည်။ ၏ ဦး တည်ရာသည် ပျားရည်လကမ်းခြေပေါ်မြင်းစီးခြင်း၊ ဟိုတယ်အားလုံးတွင်ပုဂ္ဂလိကညစာစားပွဲများနှင့် spa ဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်သောကြောင့်သူသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၏စကားပြော ဟိုတယ်များ, သင် option ကိုရွေးချယ်နိုင်သည် အားလုံး - အားလုံးပါဝင်နိုင်သည် အချို့မှာအစားအစာနှင့်သောက်စရာအစီအစဉ်များကိုသင်သီးခြားစီပေးချေသည်။
ကေမန်ကျွန်းစုသို့လည်ပတ်ရန် ဗီဇာပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်တို့သည်မက္ကဆီကို၊ ဘရာဇီးသို့မဟုတ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါကလည်း Y ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်မလိုပါ, အခုအတွက်တော့။ ကျနော်တို့ Covid နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နောက်ပိုင်းတွင်တွေ့လိမ့်မည်။ အမှန်မှာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအများစုမှာအမေရိကန်မှဖြစ်ပြီးသင်ကျူးဘားနှင့်ဟွန်ဒူးရပ်စ်တို့မှလေယာဉ်ဖြင့်လည်းရောက်ရှိနိုင်သည်။ တစ်ချိန်ကကျွန်းများသို့သင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ တက္ကစီများနှင့်ကားငှားရမ်းခြင်းများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သို့ကျွန်းများကြားတွင်ခုန်ရန်သင်သည် Cayman Airways Express လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားရမည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီမှာဘယ်ဘက်လမ်းကိုမောင်းပြီးအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ကေမန်ကျွန်းစု၏ငွေကြေးကဘာလဲ။ The ကေးမန်းဒေါ်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ်ကောင်းစွာလက်ခံခဲ့သည်ပေမယ့်။ ငွေလဲနှုန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1 CI $ ဆင့်အဘို့ဖြစ်၏။ ကောင်းပြီ၊ ဒီအချက်အလက်ကမင်းအားကေမန်ကျွန်းများအားအားလပ်ရက်ခရီးအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ » ကေမန်ကျွန်းသို့သွားရန်